Malaysia: Hoggaamiyaha ugu da`da weyn dunida oo xilka loo dhaariyay - BBC News Somali
Image caption Mahathir ayaa sheegay in laga yaabo inuu keliya labo sano xilka hayo
Mahathir Mohamad ayaa mar kale loo dhaariyay raysal wasaaraha Malaysia kaddib markii uu si aan la fileyn ugu guuleystay doorashada, 15 sano kaddib markii uu xilka ka degay.
Taageerayaasha ayaa calamo ruxayay iyagoo isugu soo baxay bannaanka qasriga Istana Negara ee Kuala Lumpur xilli ay dhaarintu socotay.
Ninkan oo in ka badan 20 sano xilka soo hayay, waa 92 jir, wuxuuna noqonayaa hoggaamiyaha ugu da`da weyn dunida ee la doorto.
Wuxuu ka soo baxay howl-gabnimada isagoo ku biiray mucaaradka kaddibna wuxuu ka adkaaday Najib Razak.
Guushiisa taariikhiga ah ayaa meesha ka saartay isbahaysiga Barisan Nasional (BN), oo xukunka dalkaasi hayay tan iyo intii uu xornimada qaatay sanadkii 1957.
Image caption Taageerayaasha Mahathir ayaa calleemo ku hor ruxayay bannaanka qasriga Istana Negara
Intee ayay la ekeyd heerka guusha?
Dr Mahathir ayaa lagu hor dhaariyay boqorka, Sultan Muhammad V. raysal wasaaraha cusub ayaa waxaa wehlisay xaaskiisa, Siti Hasmah Mohammed Ali.
Natiijada rasmiga ah ayaa muujineysay in isbahaysigiisa Pakatan Harapan (Isbahaysiga Rajada) uu 113 ka helay 222 kuraas ee loo tartamay, oo ay ku jiraan kuwo ay keliya hayn jirtay dowladda. BN ayaa helay 79 kuraas.
Dr Mahathir ayaa sheegay in isbahaysigiisa uusan aargoosi sameyn doonin balse "uu kala dambeynta soo celin doono ". Wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay labo maalmood oo fasax ah, isagoo intaa raaciyay: "Balse wax fasax ah malaha kuwa guuleystay."
Sicir bararka iyo eedeymaha muddada fog ee musuqmaasuqa ayaa ku kallifay codbixiyeyaal badan inay ka weecdaan Najib iyo isbahaysigiisii mar ahaa mid aan la liicin karin.
Sidee ayay dadku ugu qanceen soo laabashada Mahathir?
Fahmi Fadzil, oo ah xildhibaan ka soo jeeda isbahaysiga guuleystay, ayaa BBC-da u sheegay in Dr Mahathir uu horseeday riyaaq loo qabo mustaqbalka Malaysia.
Maxaa lagu xusuustaa sanadihii hore ee uu Mahathir xilka hayay?
Wuxuu ahaa raysal wasaare, iyo madaxa isbahaysiga BN, muddo 22 sano ah, laga soo bilaabo 1981 ilaa uu xilka ka degay 2003.
Hoggaankiisa, ayay Malaysia ku noqotay mid ka mid ah shabeellada Aasiya - kooxda dalalka ah ee uu dhaqaalahoodu si aad ah u kobcay sanadihii 1990-meeyadii.
Si kastaba, wuxuu ahaa nin adadag oo shuruuc dhanka ammaanka ah oo aan la isku waafaqsaneyn u adeegsaday xiritaanka siyaasiyiin mucaarad ah.
Ku xigeenkiisii, Anwar Ibrahim, ayaa xilka laga qaaday waxaana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo xadgudub galmo - tan dambe ayaana markii dambe loo xiray - markii uu ku baaqay isbeddello dhaqaale iyo siyaasadeed.
Halkee buu Najib ku guul darreystay?
Dr Mahathir ayaa sidoo kale soo gacan qabtay Najib, oo raysal wasaare soo noqday sanadkii 2008.
Image caption Najib (Bidix) ayaa waxaa hore u soo gacan qabtay Mahathir (Dhexe)
Balse Najib ayaa loo cayriyay eedeymo la xiriira musuqmaasuq, waxaa lagu eedeeyay inuu lacag gaareysa $700m (£520m) ka qaatay 1Malaysian Development Berhad, oo ahayd maalgashi dowladeed oo uu aasaasay.
Aad ayuu eedeymahan u dafiraydowladda Malaysia ayaana fasaxday, balse lacagaha loo haysto ayaa waxaa weli baaritaan ku wada dalal dhowr ah.
Najib ayaa lagu eedeeyay carqaladeynta baaritaannada Malaysia isagoo saraakiil muhiim ah xilka ka qaaday.
Eedeymahaas ayaa horseeday ka bixitaankii cajiibka ahayd ee uu Dr Mahathir ka baxay isbahaysiga BN sanadkii 2016 kaddibna uu ku biiray Pakatan Harapan, isagoo sheegay inuu ceebsaday in lala xiriiriyo "xisbi loo arkayay inuu taageero musuqmaasuqa".
Kaddibna bishii January, wuxuu sheegay inuu mar kale xukunka u tartami doono.